Saraakiisha Suudaan oo qirtay dhimashada 46 dibadbaxayaal ah – Radio Daljir
Juunyo 6, 2019 6:54 b 0
Saraakiisha dowladda Suudaan ayaa beeniyay ku dhowaad boqol ruux inay ku geeriyoodeen , howlgalo ay militariga kula dagaalamayeen dibadbaxayada kasocda dalkaasi , waxaana ay ku sheegeen tirada dhimashadu inay tahay 46- qof.
Dhaqaatiirta xiriirka la leh mucaaradka ayaa sheegay Arbacadii in ku dhowaad boqol lagu dilay caasimadda Khartuum, kuwaasi oo ahaa dibadbaxyaal taageerayay nidaamka dimuqraadiyadda.
Waxaa ay sheegeen afartan maydad ah in laga soo saaray wabiga Niil ee Khartuus maalinimadii Isniintii.
Saraakiisha wasaaradda caafimaadka ayaa sheegaya maanta oo Khamiis ah inay dhimashadu tahay 46- ruux.
Dhaqdhaqaaqayaasha mucaaradka ee Suudaan ayaa diiday dalab wada hadal oo ay dalbadeen golaha militariga, iyagoona sheegaya inaan lagu kalsoonaan karin, iyadoo ay socdaan weeraro lagu hayo dibadbaxayaasha.
Dadka deegaanka ayaa warbaahinta u sheegay inay baqdin ay ka jirto caasimadda dalka ee Khartuum.
Kuxigeenka golaha militariga ee Suudaan ayaa difaacay talaabooyinka ay qaadeen, isagoona ku eedeeyey dadka dibadbaxyada dhigaya inay dabada ka riixayaan kooxaha ka ganacsada daroogada iyo canaasiir amniga wadanka u horseedaya khalalaase.
Muxuu ka hadlay madaxwayne kuxigeenka Galmudug